Baro farshaxanka isticmaalka tilmaame MACD ee Xulashada Jeebka - Pocket Option Review
MACD (Dhaqdhaqaaqa Celceliska Isku-dhafka iyo Kala-duwanaanta) waa isbeddel raacaya tilmaame Xulashada Jeebka ay bixiso. Waxaad ka heli kartaa qaybta isbeddelka ee liiska tilmaamayaasha.
1 Isku-dubbaridka celceliska dhaqdhaqaaqa iyo kala-duwanaanta jaantuska Ganacsiga Olympikada
2 Ku saabsan Tusiyaha MACD
3 Sida loo isticmaalo tilmaame MACD ee Xulashada Jeebka
4 Furo ganacsiga iibka oo leh caaro cagaaran
5 Ganacsiga iibka furan oo leh caarada cas
Isku-dubbaridka celceliska dhaqdhaqaaqa iyo kala-duwanaanta jaantuska Ganacsiga Olympikada
Dejinta tilmaamuhu runtii waa sahlan tahay. Marka hore, gal akoonkaaga Option Option . oo guji badhanka tilmaame oo ka raadi tilmaame MACD ee liiska ku jira.
Haddii aadan jeclayn midabka khadka ama aad rabto inaad madoobaato khadka. Waxa hubaal ah in aad taas samayn karto adiga oo gujinaya calaamadda qalin-qoriyeed ee ka sarraysa tusaha.
Waxa kale oo aad bedeli kartaa wakhtiga tusaha sida waayo-aragnimadaada leedahay. laakiin waxaan aad ugu talinayaa inaadan bedelin sababtoo ah waxay si fiican ugu shaqeysaa goobaha caadiga ah.
Ku saabsan Tusiyaha MACD
MACD ama celceliska guuritaanka isku dhafka iyo kala duwanaanshuhu waa isbeddel raacaya tilmaame loo adeegsaday falanqaynta farsamada ee qiimaha saamiyada waxaana abuuray Gerald Appel dabayaaqadii 1970-yadii. Tilmaamuhu waa isku darka saddexda xariiq ee khadka Macd, xariiqda signalka, iyo histogram.
Sida loo isticmaalo tilmaame MACD ee Xulashada Jeebka
Tilmaamaha MACD wuxuu isticmaalaa saddexda dhibcood ee ugu muhiimsan. Labada sadar ee aan kor ku iftiimiyay ee sanduuqa ku jira waa khadadka EMA. Halka khadka cagaaran uu yahay EMA 12 mid kalena uu yahay EMA 26. Ema 12 waxay uga jawaabtaa si ka dhakhso badan EMA 26. iyo is-goysyada labadan xariiq waxay abuuraan calaamado iibsi iyo iibin.
Xirmooyinka ku wareegsan labada xariiq ee Ema waxaa loo yaqaan histogram. iyo Histogram-ka ay ganacsatadu u adeegsadaan xaqiijinta isbeddelka. Haddii aan aragno xaddi wanaagsan oo caaro cagaaran ah oo ka sarreeya laynka 0. Waxay muujinaysaa isbeddel xoog leh iyo liddi ku ah Haddii aan aragno qadar wanaagsan oo ah caarada cas ee ka hooseeya xariiqda 0 waxay u taagan tahay isbeddel dhab ah.
Furo ganacsiga iibka oo leh caaro cagaaran
Marka xariiqa cagaarka ah uu ka soo gooyo xariiqda cas xagga hoose oo uu ka kor maro xariiqda eber ka dibna uu ka sareeyo xariiqda cas. Waxay tilmaantaa isbeddel xoog leh. Marka xigta, ku xaqiiji isbeddelka histogram haddii aan qadar wanaagsan oo caaro cagaaran ah oo ka sarreeya eber khadka. Waxay muujinaysaa isbeddel xoog leh oo xoog leh halkan waxaan ku dhejin karnaa ganacsi iibsi.
Ganacsiga iibka furan oo leh caarada cas
Sidoo kale, Marka xariiqda cas ay xariiqda cagaaran ka soo baxdo xagga sare ka dibna xariiqda cas waxay ka sarreysaa khadka cagaaran ee eber ka hooseeya. Waxay ka dhigan tahay isbeddelka isbeddelka iyo xaqiijinta isbeddelka, haddii aan aragno qadar wanaagsan oo casaan ah oo ka hooseeya xariiqda eber waxay muujinaysaa isbeddelka isbeddelka iyo halkan waxaan ku furi karnaa ganacsiga iibka.
Marka, tani waa sida aad uga ganacsaneyso tusiyaha Macd waxa ugu fiican ee aad sameyso ayaa ah in aad isku daydo istaraatiijiyadan ku saabsan koontada Pocket Option demo oo hubi sida uu tusahan kuugu dhaqmo. Marka, aad ku tababarato ku filan, waxaad mar dambe bedeli kartaa Jeebka Option xisaab dhab ah oo aad samayn kartaa qaar ka mid ah lacag dhab ah. Ilaa iyo markaas waxaan kuu rajeynayaa ganacsi aad u faraxsan.
Dhaqaaq Celceliska Kala Duwanaanshaha Isku-dhafka
Khadka signalka MACD
Macd kala duwanaanshaha
Tilmaamaha Macd sida loo isticmaalo
Previous articleIstaraatiijiyad fudud oo SMA ah oo aad si fudud ugu isticmaali karto Xulashada Jeebka